ओ काँकरभिट्टा !- विचार - कान्तिपुर समाचार
ओ काँकरभिट्टा !
सीमालाई व्याख्या गर्ने औपचारिक भाषाले सीमा सम्बन्धका विविधतालाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको हुँदैन । राष्ट्रवादका कथ्यहरूमा पनि यथार्थका जटिलतालाई परै राखिएको हुन्छ ।
श्रावण १६, २०७७ उज्ज्वल प्रसाई
काँकरभिट्टामा नाकाकस्सी छ । कोरोना–त्रासका कारण सिमानामा साविकजस्तो आवतजावत छैन तर केही प्रक्रिया पूरा गरेर मान्छे, सवारीसाधन र सामान ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । प्रक्रिया छलेर चल्ने गतिविधि पनि उत्तिकै चलिरहेका छन् भन्ने गफ गल्लीगल्लीमा सुनिन्छ ।
यसैबीच मेची नदीमा नयाँ पुल हालियो । पुरानोभन्दा चौडा पुलले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गसँग जोड्यो । मेची पुलदेखि बसपार्कसम्म बाटो चौडा भएसँगै विभिन्न ठाउँसम्मका दूरीको सूचनाअंकित हरिया पाटी अग्ला फलामे खाँबामा टाँसिए । चौडा बाटो र नयाँ सूचनापाटी हेर्न बेलाबेला स्थानीय बासिन्दाहरू पुगिरहन्छन् ।
एसियाका धेरै सहरलाई जोड्ने महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार योजनाअन्तर्गत बनेको सडकको हरियो पाटीमा सूचना मात्रै होइन, नारा पनि छ । ‘मोदर एन्ड मोदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन ।’ अर्थात्, आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा महान् हुन्छन् भन्ने मर्म स्मरण गराउँदै एसियाली राजमार्ग काँकरभिट्टा आइपुग्यो । संस्कृत भाषाको प्रख्यात भनाइ ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ को अंग्रेजी अनुवाद भान पर्ने सो वाक्य एसियाली राजमार्गको भारतीय भेगमा प्रचलित भएर यहाँ पनि दोहोरिएको हो वा नेपालमा मात्र यस्तो लेखिएको हो, थाहा छैन ।
जे होस्, नाराले अन्तरदेशीय विकास परियोजना राष्ट्रवादी विचारधाराभन्दा अलग छैन भन्ने संकेत गर्छ । नेपाल र भारत दुवै देशको राष्ट्रवादको विचारधारात्मक मर्म एकै भए पनि यो भारतीय राष्ट्रवाद हो वा नेपाली राष्ट्रवादको प्रभाव हो भन्ने स्पष्ट छैन । संस्कृत वाक्यलाई अंग्रेजीमा भावानुवाद गर्ने काम भारतमा मात्र हुने गरेको होइन । तर, संस्कृतलाई आफ्नो राष्ट्र, धर्म एवं सम्प्रदायको असली भाषा मान्ने सत्ताधारी भएकाले भारतमै भावानुवाद भएर नेपालतर्फको साइनबोर्डमा छापिन आइपुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भारतीय मूलका समाजशास्त्री चेतन भटले आफ्नो कृति ‘हिन्दु नेसनलिज्म : ओरिजिन्स, आइडियोलोजिज एन्ड मोडर्न मिथ्स’ मा विख्यात बंगाली साहित्यकार बंकीमचन्द्र चटर्जीको अत्यन्त प्रचलित उपन्यास ‘आनन्दमठ’ हिन्दु–राष्ट्रवादको संवर्द्धन गर्ने मुख्य र प्रभावकारी कृति भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘वन्दे मातरम्’ जस्तो हिन्दु–राष्ट्रवादलाई प्रभावकारी वाणी दिने गीतको प्रयोगमार्फत भारतको ‘हिन्दु–आत्मा’ रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने आशय उपन्यासमा व्यक्त भएको छ । जन्मभूमिलाई आमा एवं दैवी शक्ति भएकी देविसँग तुलना गरेर लेख्ने सबैभन्दा सफल उपन्यासकार हुन् चटर्जी ।
गरिब, पछौटे र पराश्रित भएका कारण अहिलेको भारतमा आक्रोश र पीडा बढी छ, त्यसैले कालीका रूपमा रहेको हो, आफूलाई परचक्रीको प्रहारबाट बचाउन सफल भएपछि भारतले दुर्गा माताको रूप धारण गर्ने आशय चटर्जीको थियो । सन् १८८२ मा उपन्यास प्रकाशित भएयता हरेकपटक भारतको राष्ट्रवादी संकथनमा बंकीमचन्द्रकै आवाज सबैभन्दा मुखर छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मूल विचारधारा चटर्जीकृत ‘आनन्दमठ’ ले सुरु गरेर विनायक दामोदर सावरकरले विस्तार गरेको हिन्दु राष्ट्रवाद हो भन्ने अध्येताहरूको बुझाइ छ ।
‘नेपाल आमा’ शीर्षकमा बग्रेल्ती गीत, कविता, भनाइ पाइन्छन् । आफू जन्मेको वा नागरिक भएको मुलुकलाई आमासँग तुलना गर्ने चलन नेपालमा सुरु गर्नेहरूबारे इतिहास अन्वेषकले खोजी गरेका होलान् । त्यस्तो भाष्य प्रचलित तुल्याएको भने महेन्द्रकृत पञ्चायतले हो । पञ्चायतले निर्माण गरेको ‘आमा’ सिनेमाबारे भएका विमर्श नै यति बुझ्न काफी छन् । पञ्चायती राष्ट्रवादको कथानक तयार पार्न कस्ता काम भए भनेर खोजी गरेर प्राज्ञिक लेखन प्रशस्त भइसकेका छन् ।
नेपाली राष्ट्रवादमा भारतले सृजना गरेका राष्ट्रवादी संकथनको प्रभाव कति परेको छ भनेर पनि खोजी हुँदै होलान् । भारतबाट नेपालित्व जोगाएर राखेको दाबी गर्ने पञ्चायतले आफ्नो ‘राष्ट्र’ को रक्षा गर्न तयार पारेको बौद्धिक सम्बलमा समेत भारतमा प्रचलित हिन्दु राष्ट्रवादको प्रभाव मिसाएको हो भने, त्यो रोचक खोजीको विषय हुनेछ । सीमानाकामा ठड्याइएका नयाँ भौतिक संरचनामा पढ्न सकिने विविध भाष्यले प्राज्ञिक खोजीका अनेक ढोका खोल्न सक्छन् । समाज वैज्ञानिकका लागि नाकामा हुने गतिविधि र यहाँ देखिने विम्ब एवं संकेतहरू अध्ययनका रोचक विषय हुँदा हुन् ।
एक वर्षअघिको एउटा सानो घटना यहाँ उचित दृष्टान्त बन्न सक्छ । राजमार्ग विस्तार गर्दै आउने क्रममा भारतले नेपालको भूमिमा एउटा कोसेढुंगा गाडेर सडक–सूचना लेख्यो । भारतपट्टि नेपालको कुनै ठाउँको नाम र त्यहाँसम्मको दूरी अनि नेपालपट्टि भारतको कुनै ठाउँको नाम र त्यहाँसम्मको दट्टरी । सो कोसेढुंगामा ठाउँको नाम मात्रै थिएन, नेसनल हाइवे (एनएच) पनि सँगै लेखिएको थियो । नेपालको भूमिमा भारतले ‘राष्ट्रिय राजमार्ग’ लेखेको काँकरभिट्टाका चल्तापुर्जा मान्छेलाई चित्त बुझेन । भारतको ‘राष्ट्रिय राजमार्ग’ को पाटी नेपालको भूमिमा गाडिनु ‘भारतीय विस्तारवाद’ को अभिव्यक्ति हो भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो । कोसेढुंगाको विरोध हुन थाल्यो । यस्ता सीमा–बहसमा सधैं सुनिने तर्कहरू यसपटक पनि दोहोरिएका थिए । भारतको सामना गर्नैपर्ने उद्देश्यसाथ बहस सुरु भयो ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय काँकरभिट्टावासीले यस विषयमा आफ्ना धारणा राखे । विमर्शकै क्रममा कसैले कोसेढुंगा उखेलेर फ्याँक्नुपर्ने सुझायो, त्यो सुझाव स्विकारियो र एक दिन कोसेढुंगा मिल्काइयो । आफ्नी ‘आमासमान मातृभूमि’ मा गाडिएको ‘विदेशी किलो’ हटाउन सफल भएकामा धेरै मान्छे गौरवान्वित भए । भारतको ‘विस्तारवादी प्रयत्न’ लाई चुनौती दिएकामा त्यस्तो गौरव अनुभूति गरेका थिए उनीहरूले । यी संकेतहरू र तिनले निम्त्याउने यस्ता घटनाहरू अनुसन्धानका लागि उपयोगी विषय हुन सक्छन् ।
तर यसो भनेर काँकरभिट्टाजस्ता नाकामा सधैं यस्ता रस्साकस्सी चलिरहन्छन् भन्ने होइन । सीमालाई व्याख्या गर्ने औपचारिक भाषाले सीमा सम्बन्धका विविधतालाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको हुँदैन । राष्ट्रवादका कथ्यहरूमा पनि यथार्थका जटिलतालाई परै राखिएको हुन्छ ।
जस्तो, कोरोना–त्रासका कारण नाका कसिलो भएपछि काँकरभिट्टाका सार्वजनिक यातायात, होटल, चिनियाँ कपडा र जिन्सी सामान बेच्ने पसलहरू सुनसान छन् । उतापट्टि बजार भर्न गएका नेपालीकै कारण गुलजार रहने पानीटंकीजस्ता साना बजार उसैगरी सुनसान छन् । हरेक साँझ भारु पैसाका मुठा बोकेर काँकरभिट्टाका दुई क्यासिनोमा जुवा खेल्न आउँथे भारतीयहरू । अहिले दुवै क्यासिनो बन्द छन् । स्थानीय ग्राहक मात्रले यता र उता दुवैतिरका यस्ता केही व्यवसाय चल्न सक्दैनन् । त्यसैले नकारात्मक असर भोगेका यस्ता व्यापारीहरू नाका खुलोस् भनेर दिनरात प्रार्थना गरिरहेका छन् ।
यथार्थको अर्को पाटो पनि उत्तिकै रोचक छ । नाका कसिएपछि भने यताका खाद्यान्न व्यापारी र किरानापसले कोरोना–भयका बाबजुद किञ्चित् खुसी छन् । एक किलो चिनी खरिद गर्न पनि पानीटंकी पुग्ने नेपालीले आवश्यक सबै खाद्यान्न यतै खरिद गर्न थाले । साविक अवस्थाभन्दा दोब्बर बिक्री हुन थालेको केही किरानापसलेको अनुभव छ । लकडाउन घोषणा भएको केही समय धेरै दिनलाई जोहो गर्ने सोचेर सामान्यभन्दा अधिक सामान खरिद गरेका कारण पनि किरानापसलहरू व्यस्त देखिन्थे ।
ब्रोइलर कुखुराको व्यवसाय गर्नेहरूको अनुभव पनि लगभग उस्तै छ । साविक अवस्थामा भारतबाट सस्तो कुखुरा आएकाले यताका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सकस हुन्थ्यो । नेपालमा उत्पादित चल्ला बिकाउन हम्मे परेको सीमाका व्यापारीहरू बताउँथे । यता रेस्टुरेन्टहरू पूर्णतया नखुल्दा पनि सीमाका कुखुरा व्यापारीहरू व्यापार राम्रो भएको बताउँछन् । स्थानीय बजार पूर्णतया नेपालको उत्पादनमा भर परेका कारण व्यापार ठीकठाक रहेको उनीहरूको अनुभव छ । यथार्थको जटिलतालाई थप्दै पछिल्लो समय सीमा–तस्करीमा वृद्धि भएको छ । महामारीका कारण बेरोजगार बनेका दुवैतर्फका युवा वारिपारि लुकीछिपी गरिने अवैध ओसारपसारमा संलग्न हुन थालेका छन् । भन्सार छलेर उता पुर्‍याउने र यता ल्याउने सामान बोक्ने काममा युवा संलग्न हुँदा महामारीको प्रकोप फैलन सक्ने त्रास बढेको छ ।
वैध के र अवैध के ? कोरोना नियन्त्रणका उपाय के प्रभावकारी र के अप्रभावकारी ? काँकरभिट्टाजस्ता नाकामा यस्ता विषय सधैंजस्तै अहिले पनि उत्तिकै जटिल छन् । नाकाको सतह मात्रै देख्नेले उही हरियो पाटी मात्रै देख्छ जहाँ लेखिएको छ— ‘मोदर एन्ड मोदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन ।’
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०८:२५